Zụta Gbanwee Ubu Mkpịsị Uhie & Ogologo Ogologo Maka Girlsmụ agbọghọ - Mbupu Na-akwụghị ụgwọ & Enweghị |tụ | WoopShop®
Gbanyụọ Uwe Mkpịsị Uhie & Ogologo Ogologo Formụaka Maka Girlsmụ agbọghọ
$ 14.99 Ịgachi price $ 16.99
Akwa Ibu 3T 4T 2T 5 6
Gbanyụọ Uwe Mkpịsị Uhie & Ogologo Ogologo Maka Girlsmụ agbọghọ - 3T na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
ihe: Owu & Mkpịsị
Ogo: 90 100 110 120 130
Agba: Dị ka ihe osise ahụ
Ihe ngwugwu gụnyere: 1x Tops +1x ogologo ọkpa
Hụ mma nke ekike. Emere m ka otu nha dị 1 iji jide n'aka na, na n'ihi na achọghị m “ihe ọkụkụ” n'elu nwa m nwanyị. O zuru oke ma dị mma n'anya. N’amaghị ama ga-azụ ahịa ọzọ: oge ​​mbufe nwere ezi uche.
Ihe nrịpụta nke Très bon rụpụtara ma a rute igwe ga - ebuputa ihe ndị ọzọ. Ma fille a 22 mois et la taille t3 est parfaite
dị mma nke ukwuu ❤️